लिङ्ग पहिचान - यो के हो?
व्यक्तित्व एक व्यक्ति समाज को सदस्यको रूपमा पहिचान गर्न र आफ्नो व्यक्तिगत गुणहरू वर्णन कि सामाजिक महत्त्वपूर्ण गुण सबै व्यक्तिगत सुविधाहरू एक संग्रह रूपमा लाग्यो गर्न सकिन्छ। औसत व्यक्ति कि लिङ्ग पहिचान सुझाव, मामलामा भ्रमित हुन थाल्छ यो बिन्दुमा - अति यौन झुकाव छ, र यो मानक भिन्न भने, यो पक्कै पनि सही हुनेछ। वास्तवमा, सबै केहि थप जटिल छ, र धेरै मान्छे चिन्न यो पूर्ण सामान्य छ, विपरीत लिङ्ग को सुविधाहरू पत्ता लगाउन छक्क छन्।
कसैको पहिचान को लिङ्ग निर्धारण
पहिलो र मुख्य यसलाई कि लिङ्ग टिप्पण लायक छ - यो सेक्स, तर यौन आत्म-संकल्प पूरक कि विशेषताहरु को एक सेट छ। त्यसैले, यौन पहिचान, masculinity र स्त्रीत्व को भनिन्छ पुरुष र महिला, र लिङ्ग, क्रमशः छ। पक्कै सेक्स छैन: यसलाई शारीरिक विशेषताहरु, क्रोमोजोममा एक सेट, र जननांग को उपयुक्त प्रकार, लिङ्ग पहिचान जबकि निर्धारण गरिन्छ - यी जैविक विशेषताहरु गर्न बाध्य छैनन् भन्ने लक्षण हो।
simplistically सोच, यो लिङ्ग "वास्तविक महिला" लागू र लागि जिम्मेवार छ "वास्तविक मानिसहरू।" मानक stereotypical तर्क अनुसार, प्रत्येक सेक्स समाज नै केही आदर्श धारणाहरु पूरा गर्नै पर्छ। एक महिला नाजुक सुन्दर, यौन आकर्षक, विशेष गरी बाल हुर्काउन र Housekeeping रुचि हुन बाध्य छ, र मानिस परंपरागत एक खान, बाचेको व्यक्ति, योद्धा, र मास्टर प्रतिनिधित्व छ, "सही" उपस्थिति उपस्थिति आवश्यक छ। जहाँ प्रत्येक व्यक्ति लिङ्ग एक धारणा छ?
जन्मजात वा प्राप्त?
"भाग्य रूपमा जीव" को सिद्धान्त को प्रेरकों लिङ्ग हरेक बच्चा मा vrozhdonnosti सबै आवश्यक सुविधाहरू जिद्दी। नमुना कुनै पनि विचलन विकृति वा रोग रूपमा कथित। तथापि, लिङ्ग पहिचान को गठन समाज मा निर्भर गर्दछ, र बच्चा मात्र परिवारमा हुर्केका पनि उहाँले आमाबाबु र अन्य नातेदार को उपयुक्त व्यवहार देख्नुहुन्छ।
आमाबाबुले बच्चा तिनीहरूले सपना सेक्स को जन्म भएको थिएन भनेर निराश छन् भने, अर्ध-सचेत इच्छा "remake" सपना मा व्याप्त ढाँचा अन्तर्गत सन्तान हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा साहित्य, तर पनि वास्तविक जीवनमा मात्र होइन अवलोकन छन्। लिङ्ग पहिचान को गठन बालिका थप विपरित भन्दा केटाहरू शिक्षित संभावना संग, दबाब हुन्छ। यो हाम्रो समाजमा व्याप्त संस्कृति एक वास्तविक मानिस जन्मन छोरा पर्छ भनेर सेट गर्न धेरै हदसम्म कारण छ। इच्छित सेक्स को एक बच्चा को अभाव केही speculative नमूना अन्तर्गत "असफल भयो संतान" समायोजन, अग्लो गर्न आमाहरू र पुर्खाहरूले प्रोत्साहन दिन्छ।
लिङ्ग को समपार्श्व मार्फत बाल्यकाल
प्रारम्भिक बाल्यकाल मा, बच्चाहरु कुनै यौन वा लिङ्ग पहिचान सजग मात्र केटाहरू र बालिका बीच मतभेद अप soaking दुई वर्ष हो। अचानक खोज लिंग को उपस्थिति वा अनुपस्थितिले बन्नेछ। स्कर्ट र धनुष कुनै लिंग छ भने मात्र लगाउँथे गर्न किन गर्न सक्छन् त्यहाँ छ भने, खेलौना कार र एक पेस्तोल खेल्न यो अभिभावकको व्याख्या पछि छ। निस्सन्देह, बच्चा को लिङ्ग पहिचान सधैं अनुमोदन वा अनुमोदन बाहिर बाट प्राप्त संकेत आधारित छ एक अवचेतन स्तर मा सुरक्षित छ। को किंडरगार्टन बच्चाहरु मा भिगो स्थापना साथीहरूको प्रसारण कि र पनि खिलौने कहिलेकाहीं आफ्नो आफ्नै प्राथमिकतामा चयन, तर विशुद्धता को सिद्धान्त मा आफ्नो लिङ्ग यो याद छ।
किन, त्यसपछि, किशोरों को लिङ्ग पहिचान "असफल" गर्न सुरु? यौवन छैन केवल स्पष्ट परिवर्तनहरू काया द्वारा चिनो लगाइएको छ। यो आफै, व्यक्तित्व लागि सक्रिय खोज सुरु, र यो प्रामाणिक राय प्रश्न गर्न आवश्यक छ। धिक्रकार भन्नु, "तपाईं केटी हुनुहुन्छ" वा "तपाईं एक केटा छौं," लिङ्ग-विशेष मोडेल को लागि कल एक पूर्ण प्राकृतिक प्रतिक्रिया हो। निष्पक्षता मा उल्लेख पर्छ भनेर जो लागत एक हास्यास्पद चरम मा "सही" बच्चा टक्कर बढ्न कि समयमा आफ्नो खोज मा आमाबाबुले। उदाहरणका लागि, यो केवल unmanly कुराहरूलाई विचार, नृत्य वा संगीत आफ्नो छोरालाई निषेध गरेको छ।
लिङ्ग पहिचान प्रकार
जैविक मान्यता अनुसार, मान्छे दुई sexes मा कडाई विभाजित छन् - पुरुष र महिला। यस क्षेत्रमा कुनै पनि विभिन्नता आनुवंशिक इनकार कारण छन्। एक निश्चित हदसम्म यो आधुनिक चिकित्सा विधि द्वारा सही हुन सक्छ। अर्को विशेष सामाजिक र सांस्कृतिक विशेषताहरु, देश र स्थानीय परम्परा आधारमा फरक गर्न सक्छन् जो सुरु गर्नुहोस्। केही आरक्षण, जर्मनी, न्यूजील्याण्ड, पाकिस्तान, थाइल्याण्ड संग, क्यानाडा, अष्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य: - तथाकथित "तेस्रो तल्ला" hermaphrodites र व्यक्तिगत को अपरंपरागत लिङ्ग पहिचान मानिसहरूलाई (दुवै sexes को सेक्स विशेषताहरु को एक जैविक उपलब्धता संग) कानुनी रूपमा मात्र दस देशहरूमा पहिचान छ भारत, नेपाल र बंगलादेश। केही थप देशहरूमा सांस्कृतिक परम्परा को तेस्रो तल्ला को अस्तित्व पहिचान, तर कानून को दृश्य को बिन्दुबाट ध्यान केन्द्रित गर्न रुचाउनु जो जीवन को twilight पक्ष एक प्रकारको छ।
पुरुष मानिसहरू मा निहित र स्त्री, उपयुक्त सेक्स: सुरुमा लिङ्ग दुई प्रकार विनियोजन। को अपेक्षाकृत हाल विगतमा androgynous शुरू औपचारिक एक निश्चित प्रकार "गणित औसत" लिङ्ग दुई आधारभूत प्रकारका बीच प्रतिनिधित्व गर्दछ। मानवशास्त्रीहरूले र sociologists पनि अलग विभाग मा bigenderov, Transgender, Queer र लिङ्ग-agenderov भेद। सायद आफ्नो पूर्ण लोप अघि पारंपरिक फ्रेम धक्का र वही मुसीबत निरपेक्ष गर्न लिङ्ग सहिष्णुता ल्याउन यो इच्छा। साधारण जीवन, यो विवरण मा जा बिना केही सर्तहरू छ।
पुरुष लिङ्ग पहिचान - जोड पुरुष काया र पुरुष सामाजिक भूमिका को प्रदर्शन, साथै सान्दर्भिक गुण, बानी, प्राथमिकता र व्यवहार को संयोजन। पनि विशिष्ट सकारात्मक विशेषताहरु, पुरुष आक्रमण, जोखिम सहिष्णुता लागि सामान्य छलफल। अर्को शब्दमा, "हुन एक मान्छे" रो केटा भन्न जब आवश्यकता मिलान गर्न ढाँचा, जो मानिसहरू नरोऊ अनुसार, यो विशेष एक महिला सुअवसर छ रूपमा बुझाउँछ।
Femina लिङ्ग पहिचान - पुरुष, स्त्री काया संयोजन र परम्परागत महिला सामाजिक केही सामान्य "महिला" गुण, बानी र झुकाव सहित भूमिकाको, को विपरीत छ। यसलाई लिङ्ग को समपार्श्व मार्फत समाजमा बच्चालाई मा रंग Sliders देखि शाब्दिक सबै लिएको छ रोचक छ।
केटा गुलाबी चड्डी, वयस्क को एक महत्वपूर्ण अनुपात लगाउने वा केटी संग यो भ्रममा भने, वा रिस उठ्दैन केटी उहाँलाई जुटाउने आमाबाबुले कि चाहन्छु। दृश्य संकेत स्त्री पहिचान - सम्बन्धित महिला सेक्स परिधान शैलीहरू वा रंग। एक उज्ज्वल शर्ट लगाउने अधिकार पुरुष मानिस आफ्नो खोक्रो साबित हुनेछ flowered। खुसीको कुरा, समय समयमा फैशन निरपेक्ष सहिष्णुता र लुगा को विकल्प मा तोडने लिङ्ग बाधाओं मा जोर।
यो नै सबै समय मा अस्तित्व androgyny, तर यसलाई थप निन्दनीय छलफल भएको थियो, रोचक छ भने यो सुविधा लिङ्ग पहिचान - अरूलाई androgyne हराउनु प्रविष्ट गर्न खराब इच्छा। मूलतः androgyny दृश्य cues मा निर्भर - व्यक्ति उच्चारण masculinity वा स्त्रीत्व छैनन् भने, यो एक नजर, तपाईं वा केटा अगाडि केटी मा निर्धारण गर्न गाह्रो छ। मास्किंग "यूनिसेक्स" शैली र व्यवहार मा लुगा द्वारा compounded छ।
एक हडताली उदाहरण Brune, को Strugatsky भाइहरू "होटल" मृत Mountaineer मृतक भाइ डु Barnstokra एक बच्चा "", रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ जो "द्वारा उपन्यास को हेरोइन छलफल गर्न सकिन्छ। व्यवहार र उपस्थिति Brune सम्भव छैन के, वास्तवमा, सेक्स एउटा प्राणी, यो साँच्चै केटी छ भनेर स्पष्ट भए सम्म Neu, को तटस्थ मा यस्तो लेखे त छ निर्धारण गर्न।
लिङ्ग र यौन झुकाव
लोकप्रिय विश्वास विपरीत, लिङ्ग पहिचान को अवधारणा छैन यौन झुकाव गर्न सम्पूर्ण कारण छ। अर्को शब्दमा, स्त्री मानिस एकदम क्रूर उपस्थिति समलिङ्गी छैन आवश्यक छ, र आवरण लुकाउनु लेसबियन मा छोटो कपाल bodybuilders कुनै प्रवृत्ति देखाउँछ।
लिङ्ग को अवधारणा व्यवहार र सामाजिक भूमिका गर्न मुख्यतया कारण र अप्रत्यक्ष मात्र कामुकता आधारित छ। तसर्थ, "गलत कामुकता" दबाव एक दृश्य घटक लिङ्ग पहिचान कुनै पनि प्रभाव ल्याउन गर्दैन लागि विधि दबाउन गर्ने प्रयासहरू। हामी कामुकता को विकास मा बाह्य कारक को संयुक्त प्रभाव को संभावना छुट हुँदैन। Sexologists को बिस्तारै सघन को अभिमुखीकरण, प्रत्येक व्यक्ति घनिष्ठ प्राथमिकताहरू सहित व्यक्ति, को गठन को एक अद्वितीय तरिका मार्फत जान्छ कि दाबी गर्छन्।
bigendery र transgender हुन्
Bigender एक विशेष व्यक्तिको टाउको मा विजेता toleratnosti लिङ्ग को भिन्न को एक गर्न सकिँदैन। एक व्यक्ति STEREOTYPES को विश्लेषण मार्फत पारित बिना केही सामाजिक काम मा लिन्छ भने, हामी एक एकदम मेल खान्छ र आत्म-पर्याप्त व्यक्ति प्राप्त। लिङ्ग गर्न विरोधको मा पहिचान / सामाजिक पहिचान bigenderov मा प्रतिभा र झुकाव को सम्भाव्यता र सिपालु आवेदन जित्छ। एक मानिस, परिस्थिति को शिकार महिला सामाजिक भूमिका लिन सक्छ बाहेक यस मामला मा, त्यो पनि पुरुष भूमिका संग copes। आजको संसारमा, धेरै लिङ्ग को स्कोप मानसिक श्रम मा मिट, पाठयपुस्तक "शिकार Mammoth" थप र थप शारीरिक काम पासेसहरू र कुशल आर्जन बुद्धि को एक उच्च डिग्री संग एक व्यक्ति को रूप मा, मांसपेशीमा र अतिरिक्त टेस्टोस्टेरोनको मालिक बन्छन्। यो कुरा मा यौन पहिचान प्रदायक अप्रासंगिक छ।
जैविक र लिङ्ग आत्म-धारणा एक बेमेल छ - अर्को प्रश्न त्यहाँ एक transgender छ भने छ। बस सोच, यो transgender मानिसहरू केही दृश्य विशेषताहरु सहित महिला सामाजिक भूमिका, रुचि गर्ने सकिन्छ। उहाँले साँच्चै "हड्डी गर्न" एक महिला जस्तै महसुस भने, र शरीरलाई आत्म-संकल्प अनुरूप छैन, त्यसपछि हामी transsexuality बारेमा कुरा गर्दै छन्। लिङ्ग मामलामा, यो एक मान्छे हो। एक महिला स्त्री आइटम संग विशेष आफूलाई महसुस र संसारको देख्नुहुन्छ र मानिस सोच्छ। बेमेल जैविक सेक्स यसलाई संक्रमण द्वारा सच्याउन सिफारिस गरिएको छ। तथापि, जैविक सेक्स परिवर्तन गर्ने सबै मानिसहरू, अर्थात् transgender लाग्छ। यो एक बरु भ्रामक स्थिति जसमा धेरै व्यक्तिगत निर्णय हो।
Sexism उत्प्रेरक लिङ्ग dysphoria
लिङ्ग पहिचान को गठन जैविक मापदण्डहरु को एक बेमेल थियो भने, यो भनिन्छ लिङ्ग dysphoria। यो अवधारणा सबै लिङ्ग पहिचान विकार, रोगहरु को अन्तर्राष्ट्रिय वर्गीकरण मा, लगभग 2018 (आईसीडी 11) कामुकता को श्रेणी मा मनोरोग विकारहरु को खण्ड देखि सारियो जो पनि समावेश छ। यो अवस्था आफ्नै जैविक सेक्स अस्वीकार डिग्री आधारमा बाहिरको र गहिरो हुन सक्छ।
Sociologists र sexologists तिनीहरूले एक बच्चा वा किशोर मा गिरावट, विशेष गरी यदि थोरै लिङ्ग dysphoria sexism सक्छन् बढन भन्छन्। उदाहरणका लागि, पुरुष हुनुको घमण्ड, पुरुष मोडेल को एक मूल र आक्रामक रूप रूपमा overt misogyny प्रदर्शनी गर्न सक्नुहुन्छ - यो सेरोफेरो सबै महिला मा निहित छ भन्ने विचार प्रसारण, बिग्रेको छ। एक महिला र एक महिला हुन लज्जित - झन् खराब छ। "एक मानिस राम्रो, एक महिला हुन लज्जित भएर, म अवहेलना वस्तु हुन चाहँदैनन्।": Sexist बयान एक तार्किक श्रृंखला गर्न बच्चा सक्छ एउटै सिद्धान्त उल्टो मा काम गर्दछ: मानिसहरूको केटा अपमानजनक characterizations प्रभुत्व वातावरण मा, त्यो बेहोश अवस्थामा मानवता को "सुअवसर" श्रेणी आबद्ध गर्न चाहन्छन् गर्न सुरु भने। जैविक सेक्स लिङ्ग पहिचान विकार विकास, यो रोक्छ।
एक पितृसत्तात्मक समाज को परम्परागत मोडेल को विपरीत अशान्ति adherents, लिङ्ग सहिष्णुता अराजकता र सामाजिक र सांस्कृतिक स्थल हानि नेतृत्व गर्दैन। त्यसको विपरीत, एक कट्टरपंथी sexism र आक्रमण को अभाव, समाजमा तनाव कम dysphoria को likelihood कम र प्रत्येक व्यक्ति को वृद्धि बढवा दिन्छ।
मनोवैज्ञानिक सुरक्षा र यसको प्रकार
आशावादी वा निराशावादी जीत को हुन्?
एक वैज्ञानिक व्याख्या: मान्छे प्रेम पर्नु किन
निराश - यो स्थिति छ?
के वजन गर्न प्रेरणा हुन सक्छ?
Broca गरेको क्षेत्र कहाँ छ?
घरमा वयस्क र बच्चाहरु मा पखाला को उपचार
कसरी छिटो र सजिलै एक लामो स्कर्ट सी गर्न।
Tracheobronchitis: लक्षण, वयस्क र बच्चाहरु मा उपचार र रोकथाम
ग्राहकहरु आकर्षित गर्न प्राचीन नुस्खा
तिनीहरूलाई संकलित। Lenina, Bobruisk: समीक्षाहरु र पर्यटकहरु को फोटो
व्यावसायिक चाकू तीव्रता। व्यावसायिक चाकू तीव्रता पुस्तिका
भिटाली Grachev (Vitas): आफ्नो जीवनी, रचनात्मक गतिविधि र परिवार
कति राम्रो हेरविचार संग प्रत्यक्ष चूहहरुमा
"यस Sims 4" मा गोप्य ठाउँमा। Sims 4: गोप्य स्थानहरू, गोप्य ठाउँमा
उपकरण "Vitaphone": प्रयोगको लागि र चिकित्सकहरु को समीक्षा प्रयोगकर्ता निर्देशन
THC - Tetrahydrocannabinol छ ...: गुणहरू, चिकित्सा आवेदन। सूची नम्बर 1 - अवैध लागूपदार्थ